पीपलबोट डटकमः राष्ट्रपतिले किन रोक्नुपर्छ ?
नारायण वाग्ले - संवैधानिक परिषद् र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नाममा आएको निम्नस्तरीय यो सिफारिशलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिले सक्छन्। परिषद्लाई फर्काउने होइन। फर्काएर त के हुन्छ, त्यस्ता विवशः पात्रहरुले पुनः त्यही सिफारिश गरिदिन्छन्। राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने भनेको कार्यान्वयन नगर्ने हो।
कुनै बेला रेग्मी थितिका कुरा गर्थे
किरण भण्डारी - खिलराज रेग्मी, माधव घिमिरे र माधव पौडेल नै थिए, जसले संवैधानिक नियुक्तिमा मापदण्ड तोके। अहिले यी तीनैजना संवैधानिक परिषदमा छन्, जसले लोकमान सिंह कार्कीजस्तो भ्रष्ट छविका व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्‍यो।
सरकार किन हच्कियो लोकमान सिफारिसको जानकारी दिन?
विनिता दाहाल - सूचनाको हकबाट बञ्चित गर्न नहुने भन्ने धारणा चर्को रुपमा आइरहेका बेला परिषद्का सदस्यहरु आफैँले गरेको निर्णय प्रेसलाई सुनाउन धक मान्छन्। निर्णय गरिसकेपछि त्यसको जानकारी दिन उनीहरुलाई के ले रोक्यो?
लोकमान कसको सिफारिसमा– संयन्त्र कि भारत ?
अमित ढकाल - कार्कीको भारतसँगको सम्बन्ध के हो ? जानकारहरू भारतसँग उनको लामै सम्बन्ध भएको दाबी गर्छन् । राजसभा स्थायी समितिका सभापति र दरबारसँग लामो सम्बन्ध भएका भूपालमानसिंह कार्कीका छोरामाथि भारतीय दृष्टि धेरै अघिदेखि हो । बहुदलकालमा पनि त्यो सम्बन्धले निरन्तरता पायो ।
जवादेहीविहीन रेग्मीको दम्भ
सम्पादकीय - सर्वसत्तावादजस्तो संविधानवाद माथिको हैसियत ‘लोकतन्त्र’मा हासिल हुँदैन । रेग्मीले प्रस्तुत गरेको दम्भबाट आफू संविधानभन्दा माथि रहेको र नेपाली जनताप्रति कुनै दायित्व नरहेको मान्यता बोकेको पुष्टि भएको छ ।
श्रीमानको जो आदेश
विनिता दाहाल - विश्वव्यापी रूपमा खुला इजलासको अवधारणा आइरहेका बेला सूचनाका सम्वाहक पत्रकारलाई रोक लगाउनु भनेको शब्दमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्ने अदालत आफैंले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु हो ।
चिना हराएको अख्तियार
नारायण वाग्ले - अख्तियारलगायतका आयोगका नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्ले संविधान हेर्ने हो, राजनीतिक चिना वा जोखना होइन । राजनीतिक चिना पनि हेर्नु नपर्ने गरी चार दलभित्रै चिरा परेको छ । त्यसकारण अख्तियारको भाग्यरेखा केलाउने हो भने भोलिको राजनीतिक प्रतिनिधित्वपूर्ण परिषद् बन्न दिनुपर्छ ।
भारतसँग दाहालको नयाँ आश्वासन
युवराज घिमिरे - भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले ‘त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारी’ प्रस्तावलाई ठाडै अस्विकार गरेपछि त्यसलाई चलाखीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरे, द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुधारपछि मात्र ‘त्रिपक्षीय साझेदारी’को ‘भिजन’ रहेको बताएर । नेपाली जनतालाई नाराले लोभ्याउन र झुक्याउन सहज छ, तर भारतीय कूटनीतिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसो गर्न सक्लान् र उनले ? बरू आफ्नो पासोमा आफैं परे ? ‘आर्थिक सहयोग नदिए भारतीय सुरक्षा चासोलाई समर्थन नगर्ने’ धम्की पनि त्यहाँ दिन सकेनन् उनले ।
मृत्युको सट्टा दोस्रो बिहे रोजेँ
हरिबंश आचार्य - आजकै दिन म सधै मीराको जन्मदिन मनाउँथे । उनी रातो लुगामा सजिन्थिन् । मन खुसि हुन्थ्यो । र, आजै उनको दुई वर्षको पुण्यतिथिमा घरमा श्राद्ध थियो । जताततै पहेँलो । छोरो मोहित पहेँलो टिकामा भित्र–बाहिर गर्दा मीरालाई सम्झिएर मेरो मन भक्कानियो । मैले आफूलाई थाम्नै सकिनँ । भित्र कोठामा पसेँ । मनलागे जति रोएँ ।
पीपलबोट डटकमः दिल्ली दूर नहीँ
नारायण वाग्ले - न दाहालसँग विधायिकी अधिकार छ, न कार्यकारिणीको । उनले आफ्नो पार्टीगत वा व्यक्तिगत प्राथमिकतालाई राष्ट्रको प्राथमिकताका रुपमा विदेशीसामु कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छन् ? के चार दलीय संयन्त्रले रातारात कुनै राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज बनाएर दिएको छ अनि त्यसलाई निजामती मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर उनलाई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ?
स्वाभिमान कि समर्पण
युवराज घिमिरे - प्रचण्डको ‘कुटनीति’ मुलुकका लागि नभएर आफ्नै लागि हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । २००२ जुनमा बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर भारतलाई बुझाएको पत्रको पृष्ठभूमि र चीनभन्दा पहिला भारत जाने उनको चाहनाको पृष्ठभूमिमा नेपालमा उनको दिल्ली भ्रमणबारे सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने धेरै छैनन् । म निर्वाचित राष्ट्रपति भए भारत र चीन दुवै सुरक्षित रहने छन् भन्ने प्रचण्डको तर्क कसैले स्वीकार्ने छैन । सम्भवतः उनी झुक्ने छन् आफ्ना लागि एउटा ठूलै मुलुकसमक्ष तर शुद्ध रूपमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र ।
क्यासेटको चाङमाथि म
हरिवंश आचार्य - यमलोक पुगेको पात्रले यमलोकमा पनि सूर्यलाई देख्छ र ‘त्यो को’ भन्दा ‘सूर्य भगवान्’ भन्छ । पृथ्वीबाट मरेर आएको पात्रले ‘त्यो सूर्य तल पृथ्वीबाट हेर्दा पनि माथि देखिन्थ्यो, मरेर यहाँ माथि आउँदा पनि माथि नै देखिन्छ । त्यो सूर्य त्यति माथि रहेछ’ भन्दा हलमा धेरै बेर नरोकीकन ताली बजेको थियो ।
बिनासन्देशको चीन भ्रमण
युवराज घिमिरे - राजतन्त्रपछि नेपालमा सबभन्दा ठूलो शक्ति माओवादी नै रहेकोले आफूलाई ‘दक्षिण एसियाकै पहिलो’ पाहुना बनाएको, अनि संघीयताले नेपाल टुक्रिने चीनको आशंकालाई केन्द्रमा सर्वाधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति भएपछि संघीयताबारे चीन ढुक्क भएको निष्कर्ष निकालेर दाहाल स्वदेश फर्केको देखिन्छ । अथवा आफू राष्ट्रपति भए मुलुक संघीयताका कारण विखण्डन नहुने घुमाउरो सन्देश दिए उनले । के चीन त्यसबाट आश्वस्त भयो होला त ?
राष्ट्रपतिको कु र भट्टराईको फु
नारायण वाग्ले - राष्ट्रपति रामवरण यादवले पाँच वर्षमा पाचौं प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाए र तीनजनाको मात्र राजीनामा स्वीकृत गरे । चौथा प्रधानमन्त्री अर्थात् भट्टराईले राजीनामा दिनै नपर्ने गरी विडम्बनापूर्ण तरिकाले संविधान संशोधन गरियो । जसले राजीनामै नदिई घर बसे, तिनैले राष्ट्रपतिलाई सबभन्दा कठोर लाञ्छना लगाएका छन्।
काठमान्डु कथा: बुढा मान्छे अर्थात त्यो रुखको जरा
मनोज दाहाल - पिसाब गर्न ठीक्क परेको थिएँ, रुखको त्यो जरा चल्मलायो । मेरो सातो उड्यो । म टक्क अडिएँ । रुखको जरा चल्मलाएको कहिल्यै देखेको थिइनँ । त्यत्तिखेरै बादलबाट जूनको एउटा अंश निस्कियो र पृथिवी उज्यालो भयो । मीनभवन बसस्टपवरिपरिको जमिनमा पनि उज्यालो छरियो । मैले चल्मलाउँदै गरेको रुखको जरातिर हेरेँ । कुनै बुढो मान्छेजस्तो पो छ त्यो त !
अजयभद्र खनाल - झरीले मक्किएको झ्याल खोलेर म तल बेँसीतिर हेर्छु । तरेली परेका डाँडाका नाकहरू जाँगर नलागी नलागी तुयेंल छिचोलेर चिहाइरहेका छन् । निकै पर एउटा सानो बस्ती टल्किरहेको छ । त्यही ठाउँमा, जहाँ ती डाँडाहरूले भिरालिएर गंगाको विशाल मैदानमा पुग्न हतारिएको एउटा खोलो भेट्छन् ।
बोस्टन विपत्तिले अत्याउँदा…
खगेन्द्र दाहाल - बाटो झुक्किएर बोस्टन सहरको मुटुतिर लागिएछ, जहाँ केही बेरअघिमात्र बम बिस्फोट भएको थियो । आम्म्मम…. कति धेरै सुरक्षा हो त्यहाँ त ! जता गए पनि पुलिस, आर्मी र सुरक्षाकर्मीमात्रै । साइरन र बत्ती जडेका गाडी त कति हो कति !
तरबारझैं झुण्डिएका प्रश्न
नारायण वाग्ले - संविधान नभई देश नचल्ने होइन । संविधानले त देश चल्ने विधि दिने न हो । गणतन्त्र कार्यान्वयन भइहाल्यो, संघीयतामा जाने कबोल पनि भयो । अब संविधानको किन हतारो भन्ने धारणा बढ्दै छ । किनभने कस्तो संघीयता भन्ने सवाल तरबारझैं झुण्डिरहेको छ । कुनै पनि दलमा संघीयताका सोझा र संवेदनशील प्रश्नको सामना गर्ने सामथ्र्य छैन । उनीहरू संवाद गर्न सक्दैनन्, भरसक पन्छाउन चाहन्छन् ।
गोर्खेनोमिक्सः साझा बसका तीन सवाल
सुदीप श्रेष्ठ - बाह्र वर्षपछि काठमाडौंका सडकमा फेरि साझा बस गुड्दा पत्रपत्रिका, ट्विटर र फेसबुकमा उत्सवको माहौल छ । मानौं, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएकै पहिलोचोटि हो । तर, वास्तवमा यो खुसीको क्षण हो कि दुःखको, म निर्क्यौल गर्न सकिरहेको छैन । मेरो अन्यौलका तीन कारण छन् ।
जब मनमा उठ्दैन कुनै तरंग
देवेन्द्र सिटौला - वुद्ध मनुष्य र देवता दुवैको शास्ता अर्थात आचार्य थिए । देवता पनि मध्यरातमा ज्ञानका लागि वुद्ध सामु आउँथे । देवताहरू सुखको जतिसुकै पराकाष्ठामा भए पनि सुख आखिर बन्धन नै हो । भोग जतिसुकै गाढा र सुक्ष्म भए पनि इन्द्रीयको दासता र जालसिवाय केही होइन ।
राष्ट्रपतिसँग लहसिँदै रेग्मी
युवराज घिमिरे - सत्ता स्थापित भएको भान भएपछि रेग्मी र अन्य मन्त्रीहरू चार दलको संयन्त्रसँग बिस्तारै टाढिँदै गएको र सरकारले राष्ट्रपति यादवसँग प्रगाढ कार्यगत एकता बनाएको देखिन्छ । संयन्त्रभन्दा फरक मत राखे पनि राष्ट्रपतिलाई आफ्नो अडानबारे रेग्मीले जानकारी दिँदै आएका छन् ।
मंसिरमा चुनाव होला ?
अमीत ढकाल - आपसी आरोप/प्रत्यारोप छाडेर र आन्तरिक तयारीको व्यस्ततालाई थाती राखेर मुख्य दलहरू कति चाँडो चुनावको सुनिश्चितताको लागि पहल गर्छन्, मंसिरमा चुनाव हुने/नहुने कुरा त्यसैमा निर्भर गर्छ ।
देश प्रतिगमनमा गइसक्यो
सिके लाल - संविधानसभाको निर्वाचन असारमा नहुने लगभग पक्का र मङ्सिरमा पनि नहुने सम्भावना बढी नै छ ।
नारायण वाग्ले - एक निष्ठावान राजनीतिकर्मीले सचिवमा समेत स्वीकार गर्न नसकी आफैं सिंहदरबार त्याग्नुपर्ने परिस्थितिका पात्र लोकमानसि‌ह कार्कीलाई दस वर्षपछि लोकतन्त्रकालमा चार दलीय शीर्ष संयन्त्ररूपी पोलिटब्युरोले चोख्याएको छ ।
कारबाहीको नाममा उन्मुक्ति
सम्पादकीय - कानुनी शासन उपहासको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, एसएसपी रविराज श्रेष्ठलाई सरकारले दिएको उन्मुक्ति । झट्ट हेर्दा श्रेष्ठलाई सरकारले अवकाश दिएर कारबाही गरेजस्तो देखिन्छ । तर, जुन गम्भीर अपराधमा उनी संलग्न थिए, त्यसको कारबाही अवकाश हुनै सक्दैन ।
न्यायाधीश नियुक्ति, सधै‌ भोलि–भोलि
विनिता दाहाल - सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश अभावमा समयमै मुद्दा छिन्न सकेको छैन । न्यायाधीश कम भएको यस्तो अवस्था विगतमा कहिल्यै आएको थिएन ।
शान्ति प्रक्रियाप्रति विश्वासघात
सम्पादकीय - २०६३ मा प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेर एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले हिंसाको राजनीति त्याग्दै बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
युवराज घिमिरे - चार पार्टीको नेतृत्व तह ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं’ भन्दै अदालतमा विचाराधीन मामिलामा प्रभाव पार्ने गरी राष्ट्रपतिद्वारा उठाइएको कदमका मतियार र सहलेखक बन्न पुगे ।
नारायण वाग्ले - प्रायः विवादका विषयमा विवादै चल्ने गरी चलचित्र निर्देशन गर्ने युवा निर्देशक मनोज पण्डितको बधशालाले फेरि विवाद झेलेको छ । यसपालिको विवादले भने चलचित्र प्रदर्शन गर्ने निर्धारित विधिमै सरकारको अवैधानिक अंकुश लागेको छ ।